Ozi - ESTAmerica US ESTA E-Filing Traveling Services
Usoro anyị na ọnọdụ anyị
Site n'iji weebụsaịtị anyị, ị na-ekwenye na nkwenye na Usoro dịka akọwapụtara n'okpuru. Biko gụọ nlezianya a nke ọma tupu ị nọgide na-eji ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Maka nkọwa doro anya, akọwapụtara okwu na okwu ndị a dịka egosiri n'okpuru ebe a na-eji ya na Usoro anyị na Ọnọdụ anyị:
Ntuka aka na "anyi", "anyi", "anyi" ma obu "ulo oru" na-ezo aka na ulo oru anyi na ndi ozo
Okwu "ị", "gị", "onwe gị" na "onye ọrụ" na-ezo aka na onye ọ bụla na-eleta na ebe nrụọrụ weebụ a
"Ebe a", "saịtị", na "weebụsaịtị" na-ezo aka www.estamerica.org Okwu "ozi" ma ọ bụ "ọrụ" na-ezo aka na ESTA ma ọ bụ ngwa E-Visa ọrụ nhazi anyị na-enye
"Ozi gị", "ozi njirimara", "ozi nkeonwe" na "ozi ndị ahịa" niile na-ezo aka na data ọ bụla gbasara gị, ma ọ bụ ndị ị na-anọchite anya, nke ị na-enye anyị maka nzube doro anya nke iji ọrụ anyị
Okwu "ụbọchị ọrụ" pụtara ụbọchị n'ụbọchị izu mgbe akụ na-emeghe maka azụmahịa nkịtị
"Usoro" na-ezo aka Usoro na Ọnọdụ nke saịtị a
Anyị na-enye gị, onye ọrụ, ịnweta na njedebe dị ntakịrị na-asọpụrụ ihe ndị na-esonụ:
A na-eji saịtị ahụ na ọdịnaya ya maka iji onwe gị naanị, tinyere nkwụsị aka ọ bụla site na nchọgharị gị
Enweghị saịtị ma ọ bụ ọdịnaya ya maka ebumnuche azụmahịa
Agaghị agbanwe saịtị ahụ n'enweghị ikike doro anya na edere iji mee mgbanwe dị otú ahụ
Enweghị onye ọ bụla n'ime logos, ndịna-emeputa ma ọ bụ ederede dị na ebe nrụọrụ weebụ a na-eji enweghị ikikere ederede site na ụlọ ọrụ ahụ
Enweghi ndokwa, ntinye ma ọ bụ usoro ndị ọzọ na-etinye na saịtị ahụ, ihe ndị dị na ya ma ọ bụ ibe ya
Enweghị ikike meta ma ọ bụ ederede zoro ezo iji akara ma ọ bụ aha anyị na saịtị ọ bụla ma ọ bụ ibe na-enweghị ikike ederede site na ụlọ ọrụ ahụ
E kwere ka njikọ ndị dị n'èzí gaa na ebe obibi anyị ma ọ bụrụ na njikọ ejighi ụzọ na-anọchite anya ụlọ ọrụ ma ọ bụ saịtị ma ọ bụghị dị ka mkparị ma ọ bụ mkparị
Enweghị ihe eji edepụta ọdịnaya, ma ọ bụ site na aka ma ọ bụ site na ntinye aka (gụnyere robots ma ọ bụ ntinye data) ma mee ka ndị ọzọ dị iche iche, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ azụmahịa nyefee ya
Ihe ikikere ma ọ bụ mgbochi ọ bụla dị n'elu na-etinye aka na ọdịnaya na ihe niile nke saịtị a ma bụrụ nke a ga-eme ka ọ ghara ime
Usoro ntinye ngwa
Ọ bụ naanị ọrụ nke onye ọ bụla njem iji chọpụta ma ọ bụ chọrọ visa ka ị gaa mba ọzọ tupu ị gaa. Dabere na mba gị na akụkọ ihe mere eme, ị nwere ike iru eru itinye akwụkwọ maka ikike njem njem US (ESTA - Electronic System for Travel Travel) mgbe ị gara USA. Iji nweta ESTA, ị ghaghị ịnye nkọwa ụfọdụ gbasara onwe gị, paspọtụ gị na ihe mere ị ga-eji gaa mba ahụ.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na-enye ụdị ntinye akwụkwọ weebụ yana ajụjụ niile ị ga-achọ ịza iji nyefee ngwa maka ESTA. Akụkụ nke ọrụ anyị pụrụ iche bụ iji nyochaa azịza ị na-enye, tinyere ozi gị, tupu anyị dezie ma nyefee ngwa ahụ n'aha gị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ozi agbakwunyere ma ọ bụ nyochaa ihe ọ bụla nwere ike imebi ngwa gị, anyị ga-ezitere gị email. Biko rịba ama na nyocha ọ bụla ga-egbu oge nhazi.
Ozugbo anyị chọpụtakwara na ozi ị nyere dị irè ma zuo ezu, anyị nyefere akwụkwọ gọọmentị US maka nkwado. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla enweghị ike itinye akwụkwọ gị maka nhazi, anyị ga-agwa gị ma kwụghachi ụgwọ gị.
Dị ka otu akụkụ nke ọrụ anyị, anyị nwere ike idezi adreesị ndị edobere ka ha kwekọọ nchịkọta ọkwa adreesị mba ụwa nke ochichi United States chọrọ. Adreesị ndị edepụtara na ikike njem (ESTA) nwere ike igosi n'okpuru NKWUKWỤKWỌ NDỊ OZI, NKWUKWỤKWỤKWỌ NDỊ NA-EME NA EMIOKWU EMPLOYMENT.
Iji nweta nzaghachi na ngwa ESTA gị nwere ike iji 72 awa. Otú ọ dị, anyị na-enye ndị njem niile aka ịmalite usoro ngwa ngwa ESTA ngwa ngwa, ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 7 tupu ịpụ apụ iji nye ohere maka oge ọ bụla na-atụghị anya ya ma ọ bụ nsogbu.
Anyị na-enye ịhazi ma nyochaa ikike ikike njem njem eletriki maka nleta na USA. Biko rịba ama na ụlọ ọrụ anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị na-ejikarị aka na arụ ọrụ. Ha adịghị ejikọta na ngalaba ọ bụla gọọmenti, ụlọọrụ ma ọ bụ ọrụ. N'ime usoro ntanetị online, enwere ọtụtụ mpaghara a ghaghị iji mezue iji nyefee ikikere njem zuru ezu (ESTA) ngwa maka nyochaa na nhazi. Ndị ọbịa niile na ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere nhọrọ nke ịbanye ngwa ha ozugbo na ụlọ ọrụ gọọmentị ukara n'enweghị enyemaka anyị. Ugoro ngwa maka ikike njem njem US bụ ugbu a USD $ 14.00 nyere n'aka gọọmenti US. Site n'inye anyị data gị iji mezue ozi anyị, ị na-akwado na ị gafeela afọ 16 ma ọ bụ nwee nkwenye nna / onye nlekọta iji nyefee ngwa ahụ na weebụsaịtị anyị.
Ọ bụ naanị ọrụ nke onye njem ọ bụla iji mee ihe niile chọrọ gbasara nleta ha na mba ọzọ. A chọrọ ka ị zaa ajụjụ niile n'ụzọ zuru oke na n'ụzọ zuru oke mgbe ị na-eme ka ikikere njem gị (ESTA). Ọ bụrụ na ozi ọ bụla ezighi ezi, enwere ike ikwe ka ịbanye n'ụgbọelu ma ọ bụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ enwere ike ịjụ ịbanye na obodo ịchọrọ ịchọrọ. Na nke a, ụlọ ọrụ anyị enweghị ike ịdabere na ụgwọ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọghọm.
Ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ anyị
Enweghị ụgwọ iji nweta ebe nrụọrụ weebụ anyị, lelee ngwaahịa / ọrụ anyị ma ọ bụ jụọ ajụjụ. Otú ọ dị, anyị na-akwụ ụgwọ iji kwenye, nhazi na nyochaa ngwa. Tupu ịmalite ngwa ESTA, anyị ga-akọwa nke ọma ụgwọ ọrụ na ọnụahịa zuru ezu. A na-ebu onye ọ bụla na-eme njem njem (ESTA) ngwa a haziri aha na USD $ 89.00 nke ọ bụla, nke gụnyere ụgwọ iwu iwu nke US maka USD $ 14.00. Maka ịnyocha ma nyochaa ikike ikike njem dị ugbu a, anyị na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ maka USD $ 39.00. Enweghị ụgwọ ọ bụla ọzọ. Site na ịmecha nzọụkwụ na ịpị bọtịnụ ịkwụ ụgwọ, ị kwetara na ụgwọ ụlọ ọrụ anyị kwadoro. Ịkwụ ụgwọ naanị site na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị debit. A nabatara ụdị isi niile gụnyere Visa na MasterCard. A ga-akwụ ụgwọ nke ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa na dollar US ($). Cards na ego ndị ọzọ karịa dollar US ga-ebu ụgwọ anyị gbanwere site na iji mgbanwe ego nke ụlọ akụ. Ịzụ ahịa ahụ nwekwara ike ịnweta ụgwọ ndị ọzọ ma ọ̄ bụ ụgwọ ọrụ maka kaadị nke onye na-ahụ maka kaadị nyere. Anyị enweghị mmetụta maka ụgwọ ndị ọzọ dị otú ahụ.
Iwu niile e nyere na weebụsaịtị anyị gụnyere usoro ntinye akwụkwọ a chọrọ mkpa na ajụjụ na ozi ịkwụ ụgwọ nke ndị ahịa niile ga-agwụ. Omume a nwere ike ime ya site n'aka onye ahịa nke na-enye ya iwu, ma ọ bụ maka onye njem ahụ. Anyị nabatara onyinye ahụ iji hazie ikikere njem mgbe oge zuru ezu na ngwa ịkwụ ụgwọ. Anyị nabatara iwu a ozugbo anyị zigara email ahụ site na ikikere njem njem. Ịzụta ọrụ nhazi anyị gosiri na anabatara Usoro na Ọnọdụ. Enwere ike ịme nkwekọrịta a n'asụsụ Bekee ma ọ bụ asụsụ a họọrọ mgbe ịmechara iwu ahụ. I nwere nhọrọ ịhapụ ọrụ nkwekọrịta a site n'ịgwa anyị akwụkwọ site na ya kpọtụrụ anyị mgbe a kwụsịrị ịkwụ ụgwọ.
Ikike gị ịhapụ
Ị nwere ike ịrịọ maka nkwụghachi ma ọ bụrụ na ịchọtaghị ngwaahịa anyị ma ọ bụ ọrụ anyị na-enye iji nweta afọ ojuju. N'okpuru usoro nke iwu nkwụghachi anyị, ị nwere ike ịhapụ ọrụ gị mgbe ọ bụla ịchọrọ. Iji jiri ikike a mee ihe, ị ga-ezigara ndị ọrụ ọrụ ahịa anyị na info@estamerica.org na-agwa anyị na ị na-ede akwụkwọ na ị nwere ebumnuche nke ịhapụ ọrụ ahụ.
Ihe si na nhapu
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịhapụ ọrụ a, a ga-akwụghachi gị maka ịkwụ ụgwọ niile. A ga-akwụghachi ụgwọ gị site na iji otu ugwo ịkwụ ụgwọ nke i ji mee ugwo.
A na - eduzi azụmahịa niile na dollar United States. A ga-enye gị nkwụghachi ụgwọ na dollar US ma tinye ya n'ime ụbọchị abụọ nke akwụkwọ arịrịọ gị edere maka nkwụsị gị na nkwekọrịta gị. Ozugbo i nwetara ụgwọ ahụ, ụlọ ọrụ ụlọ akụ ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ gị nwere ike ịtụgharị ya na ego gị. Ị ga-enweta ụgwọ USD ahụ dị ka ebubo na nloghachi.
Ọ bụrụ na akwụ ụgwọ gị site na kaadị akwụmụgwọ, anyị ga-enye gị nkwụghachi gị n'otu kaadị akwụmụgwọ ahụ ejirila na mbụ azụmahịa. Enweghi ike ịkwụghachi ego site na iji ego, ego ma obu ego. Enweghị ụgwọ iji rịọ arịrịọ kagbuo.
Mgbe ị na-eziga arịrịọ gị edere maka ịhapụ gị site na email ahụ info@estamerica.org, ị ga-agụnye nkọwa ndị a:
Ihe mere ị na-arịọ nkwụghachi
Nọmba nọmba gị (nke dị na ozi email ị nwetara na-akwado usoro gị)
Nchịkọta ikpeazụ anọ nke akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị debit ị na-akwụ maka usoro gị
Aha gị, dị ka ọ pụtara na mbụ na ozi ịgba ụgwọ enyere
Anyị bụ ụlọ ọrụ nkeonwe, anyị enweghị ndị mmekọ ma ọ bụ njikọ ọ bụla gọọmentị. Ọ bụrụ na enyere gị ikike ịnweta njem eletriki (E-Visa) mgbe anyị na-etinye maka ya na nnọchite gị, anyị nwere ụgwọ maka ọrụ ego. Nzuzu nke ikpeazụ na nke ikpeazụ iji nye ma ọ bụ jụ ịbanye ná mba ị na-aga na onye ọrụ gọọmentị na ọdụ ụgbọ mmiri gị.
Site n'inye anyị otu ma ọ bụ karịa nọmba ekwentị n'oge usoro ngwa, ị na-ekwenye na ịnweta nkwukọrịta ekwentị na ọrụ nhazi nke enyere na weebụsaịtị. Mkparịta ụka ekwentị nwere ike ịbụ n'ụdị ozi ederede, oku ndị ahịa, oku a na-ezigara na / ma ọ bụ oku oku. Oku na ozi nwere ike iweta ụgwọ ndị ọzọ site n'aka onye na-eweta ekwentị gị. Anyị agaghị ere ma ọ bụ jiri nọmba ekwentị gị maka nzube ọ bụla. Nọmba ekwentị ị na-enye bụ naanị iji kwado arịrịọ nhazi na ehichapụ na-adịgide adịgide otu ugboro agakwaghị achọ.
Nchịkọta data na ehichapụ
Anyị na-eji ngwa weebụ nchịkọta weebụ iji melite ọrụ anyị, bulite weebụsaịtị, ma ghọtakwuo omume nke ndị ọrụ mgbe ịga na ngalaba anyị. A na-ewere data ndekọ akụkọ ahụ dịka 'na-adịghị achọpụta' ma nwee ike ịgụnye nsonaazụ nchọgharị, nyocha ihuenyo, oge nleta, ịkọwa saịtị na ụdị ihe ọmụma dị otú ahụ. Mgbe ị na-eji ebe nrụọrụ weebụ anyị, ị na-akwado nkwenye, nhazi, na nnyefe nke data na-enweghị nyocha
Anyị na-anakọta ịchọta data ị nyere site na iji afọ ofufo n'oge akwụkwọ ngwa anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị. Anyị na-achọ ozi / data a iji nyochaa ma dezie ikike njem gị (ESTA). Ị kwenyere na nhazi data site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na-eme akara kwesịrị ekwesị na ụdị ngwa ahụ. A ga - eji data ị nyere nyezie ikikere njem (ESTA). Ụlọ ọrụ anyị agaghị eji data gị maka ihe ọ bụla ọzọ ọ gwụla ma achọrọ iwu. A ga-ehichapụ ozi gị site na nchekwa data anyị mgbe arụ ọrụ ahụ kwụsịrị ma ọ dịkwaghị ka ọ dị mkpa iji dobe maka ọrụ ndị ahịa.
Ịjụ ESTA ngwa
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịhazi ngwa gị maka ihe ọ bụla, ịnwere ike itinye akwụkwọ ọzọ site na iji ọrụ dị iche. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti dị mkpa ma nyefee onwe gị ngwa. Mkpebi ikpeazụ iji kwado ma ọ bụ ịjụ ihe ọ bụla ESTA ma ọ bụ akwụkwọ E-visa bụ kpam kpam na ọchịchị ọ bụla. Ọ bụrụ na a jụghị akwụkwọ gị, anyị na-akwado ka ị banye na ụlọ ọrụ nnọchiteanya ma ọ bụ consulate na-anọchi anya mba ịchọrọ ịga. Ha ga-enye ndụmọdụ banyere otu esi enweta visa onye nleta ọ bụla. Usoro a nwere ike iwe ogologo oge karịa ngwa E-visa mgbe niile. A ghaghị ikwe ka oge ọzọ nye ohere maka oge.
N'ọnọdụ pụrụ iche, otu gọọmenti nwere ike ịhọrọ ịhapụ nkwado maka ikikere njem njem eletrik (E-visa ma ọ bụ ESTA) mgbe akwadochara ya. N'ọnọdụ ụfọdụ, ikike akwadoro gbanwere ọnọdụ nke 'Kwadoro' na 'Enweghị ikike ịga leta E-visa'. Ọbụna ma ọ bụrụ na akwadoro ngwa gị, ọ bụ naanị ikikere ịga. Ọ naghị ekwe nkwa ịbanye ná mba ị na-achọ ileta. Mkpebi ikpeazụ dị n'aka Agụmakwụkwọ na onye ọpụpụ mgbe ị rutere ọdụ ụgbọ mmiri. Anyị enweghị ike iburu ibu ọrụ ọ bụla maka ụgwọ ọ bụla na-efu ma ọ bụrụ na emebiere mkpebi iji kwụsị ma ọ bụ ịhapụ nkwado maka ịbanye mba. Enweghị ike ịtụ anyị ụgwọ maka ụgwọ ọ bụla ma ọ bụ azọrọ n'ihi mgbanwe dị otú ahụ nke mkpebi ikpe.
Onye na-ahụ maka saịtị na nke ziri ezi
Dịka ụlọ ọrụ dị mkpa, anyị na-eme ihe niile nwere ike ime iji jide n'aka na ozi ndị dị na weebụsaịtị anyị bụ ihe ziri ezi na nke oge. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume maka ụfọdụ nkwupụta iji tinye njehie, nlele, oge agafe ma ọ bụ na-efu ihe ọmụma na anyị anaghị anabata ụgwọ maka nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ ego nwere ike ịkpata ya. Nke a na-agụnye ma ụlọ ọrụ anyị na / ma ọ bụ weebụsaịtị a, ma nsogbu ndị ahụ bụ ihe onwunwe ma ọ bụ enweghị ihe ọhụụ, na-apụta ma ọ bụ na-apụtaghị na ojiji ma ọ bụ ịnweta weebụsaịtị yana ozi dị n'ime ya, gụnyere njezi ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Ihe ọmụma anyị na-enye dabeere na ozi ọha na eze na ihe ọmụma anyị nke mbụ banyere ESTA na E-visas. Enwere ike ịnweta ọdịnaya, weebụsaịtị na ngwaahịa niile na '' dị ka 'ọ na-enyeghị akwụkwọ ikike ma ọ bụ nkwa nke ụdị ọ bụla, ma ọ bụ ekwupụta ma ọ bụ ihe atụ. Anyị na-agbagha ikike ọ bụla na ikikere niile na iwu dị ugbu a kwere. Nke a na-agụnye, ma ọ bụghị njedebe na, ihe ngosi akwadoro, nke kwesịrị maka nzube e bu n'obi, ikike ịzụta ma ọ bụ mmebi iwu. Ụlọ ọrụ ahụ anaghị enye aka ma ọ bụ na-egosi na ngwaahịa ọ bụla, ọrụ ma ọ bụ ọrụ nke saịtị anyị na-enwe enweghị nsogbu ma ọ bụ mmejọ. Anyị enweghị ike ikwe nkwa idozi nsogbu ọ bụla, ma ọ bụ na saịtị ahụ na sava ya nweere onwe ya pụọ ​​na ihe ndị na-emerụ ahụ, nje ma ọ bụ malware. Ụlọ ọrụ anyị enweghị ike ịme ihe ọ bụla ma ọ bụ nkwenye gbasara iji ihe enyere na saịtị a banyere eziokwu ya, ndabere, ike ya, oge, ezi, uru ma ọ bụ ọrụ ọ bụla. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ọchịchị na-ekweghị ka ihe ndị a na-emepụ na njedebe na-ekweghị ka ụfọdụ n'ime njedebe ndị a dị n'elu ghara ịdị na-adabere na gị.
A na-ezube ozi a na-enye na saịtị weebụ a iji mee ihe maka naanị maka atụmatụ onwe onye na nke na-abụghị nke azụmahịa. A na-ekwe ka ndị ọrụ budata ọdịnaya ma chekwaa ya na kọmputa ha, ọ bụrụhaala na ha ejiri ha eme ka ọ ghara ịgbanwere ikikere ọ bụla ma ọ bụ ọkwa nke ụlọ ọrụ. Enweghị ike ịkọwa ozi ahụ, ma n'asụsụ mbụ maọbụ dịka nsụgharị.
N'ọnọdụ ahụ a gwara gị na ebe nrụọrụ weebụ anyị si na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ, ụlọ ọrụ anyị enweghị ike ịdabere na saịtị, saịtị ma ọ bụ ọdịnaya. Ha enweghị ike ịchịkwa anyị. Ọ bụrụ na ịhọrọ iji onye ọ bụla na-eweta ma ọ bụ saịtị ndị ọzọ, anyị na-enye ndụmọdụ na ị na-agụ iwu ha, usoro na ọnọdụ dịka anyị na-enweghị ike ibu ọrụ maka ọdịnaya na ọrụ ha. Mgbe anyị na-enye njikọ na saịtị ndị ọzọ, anyị na-akpachara anya iji hụ na saịtị ndị ahụ adịghị emebi iwu ọ bụla. Otú ọ dị, ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịtụ anya na anyị nwere ike ịmegharị nyocha na saịtị ndị ahụ. Anyị na-ahọrọ nanị ijikọta weebụsaịtị ebe anyị na-ahụbeghị mmebi iwu ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị hụrụ ọkwa ọ bụla ma ọ bụ omume rụrụ arụ, anyị na-eme ngwa ngwa iji dozie ọnọdụ maka nchekwa nke ndị ọrụ anyị.
Ihe ọdịnaya nke weebụsaịtị a na saịtị ya na-echebe site iwu nwebisiinka mba na iwu nwebisiinka nke na-achịkwa ụlọ ọrụ ọ bụla anyị họọrọ ịzụ ahịa. Onye obula choro imebi iwu ndi nwebigara iwu n'enweghi nkwenye edere n'aka anyi ga eme ihe megidere ha. Nke a na-emetụta nhazi na ọdịnaya nke saịtị ahụ na ihe niile na faịlụ dị n'ime, gụnyere ndịna-emeputa, ederede, faịlụ mgbasa ozi, ụdị, akwụkwọ, data echekwara, ihe dị na peeji nke na ngwanrọ metụtara. A na-echebe ha niile site n'aka iwu nwebisiinka mba ụwa ma bụrụ ihe onwunwe nke ụlọ ọrụ anyị n'oge niile.
Ị nwere ike ọ bụghị, ma e wezụga na ikikere e dere ederede anyị, kesaa ma ọ bụ jiri azụmahịa mee ihe. I nwekwara ike ịnye ya ma ọ bụ chekwaa ya na weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ ụdị ọzọ nke usoro nyochaghachi nke kọmputa.
A na-akpọ ndị ọbịa ka ha kpọtụrụ anyị site na email:info@estamerica.org Unu ezigala akwụkwọ ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ paspọtụ anyị site na nkwụsị mgbe niile. Site na ịkpọtụrụ anyị site na ozi-e ma ọ bụ site na weebụsaịtị anyị, ị kwenyere na nkwurịta okwu dị otú a bụ iwu kwadoro. Ị kwadoro maka nhazi data anyị natara n'aka gị gụnyere ederede email n'onwe ya ma lee nke ọ bụla agbakwunyere. Anyị na-edebe ikike ịkwado ndị ọrụ naanị site na ozi-e ma ọ bụ site na weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ma ọ bụ na-achọghị ịkọrọ anyị ozi email, ọ nwere ike ịmetụta ọrụ anyị na-enye na-akpata nkwụsị nke iwu gị. Enweghị ike ijide anyị maka ozi ngwa ngwa furu efu ma ọ bụ ehichapụ ma ọ bụrụ na ị họrọ ịghara ịgwa anyị okwu.
Anyị na-agba ndị ahịa niile ume inye azịza iji dozie ihe ọ bụla ma melite ọrụ anyị. Biko zitere anyị ozi info@estamerica.org ma dee "Nzaghachi" ma ọ bụ "Mkpesa" na isiokwu isiokwu maka nlebara anya na mkpebi. Anyị ga-edozi okwu gị nke ọma ma zaghachi n'ime ụbọchị 2.
Ebumnuche nke Ngwá Agha Ntuziaka anyị na-eme bụ iji dozie enweghị afọ ojuju na ọrụ ahụ. Dị ka otu ụlọ ọrụ, anyị kpebisiri ike idozi nsogbu ọ bụla a na-ewere na ọ chọrọ nzaghachi. Enwere ike ide akwụkwọ mkpesa na ederede.
A na-ewere ụdị mkpesa ụfọdụ dị ka nzaghachi nzaghachi nke na-anaghị achọ nzaghachi na-esochi. Anyị na-enwe ekele nzaghachi, dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma, iji melite ọrụ anyị. Otú ọ dị, Nkwekọrịta Nchịkọta Mkpesa a bụ naanị metụtara nzaghachi nke chọrọ nzaghachi. Enweghi ego iji nye mkpesa.
A ga-eme mkpesa niile n'otu ụbọchị ma gbasoo ya. A ga-agwa onye ahụ na-eme mkpesa banyere ọganihu dị na ya n'ụzọ dị nro. Ihe mgbaru ọsọ anyị na-edozi esemokwu ahụ ma bịa na ngwọta nke dị mma maka abụọ ahụ. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike idozi esemokwu dị na aka n'ime oge kwesịrị ekwesị, anyị ga-achọ ntụgharị esemokwu ọzọ iji kwurịta ma mee ka okwu ahụ gbasaa.
Mgbe ị na-eme mkpesa, biko gụnye ọtụtụ nkọwa dịka o kwere mee ka anyị wee ghọta nsogbu gị na ọnọdụ gị. Enwere ike itinye akwụkwọ nkwado ọ bụla maka amaokwu. Ọ bụrụ na ị maghị otu esi emepụta mkpesa ahụ, biko kpọtụrụ anyị site na email (info@estamerica.org) ma kọwaa okwu ahụ nkenke. Anyị ga-eme ike anyị niile iji dozie nsogbu ahụ.
Biko zitere anyị ozi na: info@estamerica.org ma dee "ỤLỌ ỤLỌ ỤLỌ ỤLỌ" n'akwụkwọ nke isiokwu ahụ ozugbo.
Nkwụsị nke Ọrụ
Anyị debere ikike iji kwụsị ọrụ anyị na gị maka ihe ọ bụla n'oge ọ bụla. Nke a gụnyere ngwa maka ESTA na E-visas. Ọ bụrụ na anyị kwụsị ma ọ bụ kagbuo ozi anyị na gị, nke a ga-agụnye nkwụsị nke ịnweta gị na mpaghara ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ anyị, ịkagbu ọrụ ọ bụla na ọrụ niile, na ịkagbu aha ndebanye aha gị onwe gị.
Ọ bụ ọrụ naanị onye ọrụ na-agụ ma nyochaa Usoro na Ọnọdụ anyị niile. Anyị debere ikike ịgbanwe ụdị okwu na ọnọdụ ndị a na-enweghị ọkwa, maka ihe ọ bụla. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi mgbanwe na iwu, nchedo nche ma ọ bụ mgbanwe na ngwaahịa na ọrụ anyị na-enye.
NKWU AHỤ LElee OKWU AHỤ